अस्टिन पालतू पशुहरू जीवित! साझेदारी - राम्रो एयर टीम द्वारा K9 मास्क
घर > अस्टिन पालतू पशुहरू जीवित! साझेदारी
अस्टिन पालतू पशुहरू जीवित! साझेदारी
१% K1 मास्क मुनाफा अस्टिन पालतू पशुहरू जीवितलाई दान गरीएको छ!
अस्टिन गर्वका साथ देश मा सब भन्दा लामो र लामो चलिरहेको नो किल शहर हो अस्टिन पालतू जानवर Alive बीच एक महत्वपूर्ण छ र अद्वितीय साझेदारी को धन्यवाद! र शहरको नगरपालिका आश्रय, अस्टिन पशु केन्द्र।
K9 Mask® अस्टिन घरपालुवा जनावरहरूसँग जिउँदो छ! अग्रगामी अभिनव जीवन बचाउने कार्यक्रम जनावरहरूलाई बचाउन सबैभन्दा धेरै इच्छामृत्युको जोखिममा।
हामी आफ्नो लाभको १% दान गर्दै छौं संसाधन, शिक्षा, र अस्टिन पालतू जानवरहरू एलाइभ मार्फत साथी जनावरहरूको हत्यालाई हटाउनको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू प्रदान गर्न।
जब तपाईं एक K9 मास्क खरीद गर्नुहुन्छ तपाईं घरपालुवा जनावरलाई जोगाउनुहुन्छ
अस्टिन पालतू पशुहरू जीवित! असुरक्षित, घरविहीन घरपालुवा जनावरहरूले वास्तवमै हामीलाई सबैभन्दा बढी चाहिएको बेला सुरु भयो। जब यो पहिलो पटक कल्पना गरिएको थियो, अस्टिनको kill 87% को दर-दर थियो, आज उनीहरूसँग 97%% को बचत दर छ। कठिनाइहरूको माध्यमबाट, उनीहरूले प्रेरणा पाए; र यो प्रेरणाको माध्यमबाट, जनावरको ज्यान बचायो। उनीहरूको बन्ने यात्राको बारेमा बढि जान्नुहोस् - र तिनीहरूको स्थिति कायम राख्दै - देशको सबैभन्दा ठूलो नो किल शहर।
२००,80,000 देखि ,2008०,००० घरपालुवा जनावर सुरक्षित गरियो
२०१ in मा,, .9,456 घरपालुवा जनावरहरू
अस्टिन शहर को लागी 98% प्रत्यक्ष रिलीज दर
२०० 2008 मा, अस्टिन पालतू पशुहरू जीवित! अस्टिनलाई नो किल शहर जतिसक्दो चाँडो भन्दा चाँडो भन्दा राम्रो बनाउनको लागि एउटा साहसी र आक्रामक पहल शुरू गर्‍यो। APA! अस्टिन सिटी शेल्टरमा मर्दै गरेका घरविहीन घरपालुवा जनावरहरूको लागि "सुरक्षा जाल" बनाउन आवश्यक स्रोतहरू निर्माण गर्न सुरु भयो। आश्रयमा जनावरहरू किन मारिए भन्ने कारणहरू हेर्दै, एपीए! विशिष्ट जीवन बचाउने कार्यक्रमहरू सिर्जना गर्‍यो जुन ती मुद्दाहरूलाई हेड-अन सम्बोधित गर्थ्यो। २०११ मा मात्र तीन बर्ष पछि, अस्टिनले 2011 ०% बचत दरमा हिट राख्यो र २०१ 90 सम्ममा%%% सम्ममा थियो!
अझै सिक: AustinPetsAlive.org